နှင်းဆီအငြိမ့် အဖွဲ့ထဲကို ပြန်ဝင်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ ဆိုတာ ဦးမျိုးရဲ့ စိတ်ဆန္ဒပေါ်မှာလည်း မူတည်တာပေါ့လို့ ပြောလာတဲ့ မိုးမိုး….. – Shwewiki.com
နှင်းဆီအငြိမ့် အဖွဲ့ထဲကို ပြန်ဝင်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ ဆိုတာ ဦးမျိုးရဲ့ စိတ်ဆန္ဒပေါ်မှာလည်း မူတည်တာပေါ့လို့ ပြောလာတဲ့ မိုးမိုး…..
December 1, 2020 By admin Celebrity
အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော်မိုးမိုးကတော့ ယခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးပြီး တစ်ကိုယ်တော်အခွေ အယ်လ်ဘမ်များလည်း ထွက်ရှိထားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးမိုးဟာ နှင်းဆီအငြိမ့်မှာလည်း ပါဝင်တင်ဆက်ခဲ့ဖူးတာဖြစ်ပြီး ၇ နှစ် နီးပါးလောက်ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့တာပါ ယခုရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ မိုးမိုးက နှင်းဆီအငြိမ့် အဖွဲ့ထဲကို ပြန်ဝင်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ ဆိုတာကို ပြောပြလာ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
“နောက်ပိုင်းတော့မပြောတတ်သေးပါဘူး ဦးမျိုးရဲ့ စိတ်ဆန္ဒပေါ်မှာလည်း မူတည်တာပေါ့ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူကလည်း နှင်းဆီရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့လေ ကျွန်တော်တို့ကတော့
အဓိကတစ်ခုရှိတာက ဘာလည်းဆိုတော့ အငြိမ့်ဆိုတာ ရိုးသားစွာနဲ့ ပရိသတ်အပေါ်မှာ ဖီလင်အပြည့်နဲ့ တကယ့်ကို စိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ နှလုံးသားထဲမှာ ဒီအငြိမ့်က ရှိတယ်
ဒီလိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုနောက်ပိုင်းကိုနေတိုးကရော ထွန်းထွန်းကရောပေါ့နော် အရင်တုန်းကသွားခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်လေးတွေကို Blog လေးတွေ ပြန်တင်နေတာ တွေ့တော့ ဒီရက်ပိုင်း အငြိမ့်ဆိုတာခေါင်းထဲပြန်ရောက်နေတယ် ပြောတော့မပြောတတ်သေးပါဘူး အခြေအနေအပေါ်မူ တည်ပြီးတော့မှ လုပ်ရမှာပါပဲ….
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ သူတို့ အငြိမ့်ကနေစဉ်မှာ ကိုယ်က ပရိသတ်အနေနဲ့ ပွဲကြည့်ဖြစ်တယ် ပြန်လွမ်းလားဆိုတော့ အဲ့လိုပြန်မလွမ်းဘူး
ပြန်မလွမ်းဘူးဆိုတာက သူတို့က ပြက်လုံးအသစ်တွေလုပ်နေတာကိုး ပြက်လုံးအသစ်တွေ လုပ်နေတာဆိုတော့ ပြက်လုံးအသစ်ကို ကိုယ်ကပရိသတ်အနေနဲ့ အားပေးနေရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ အငြိမ့်ကခဲ့တာတွေကို မေ့နေတာပေါ့…
ဒါပေမယ့် အရင်တုန်းက အငြိမ့်တွေ ပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့ လွမ်းတာပေါ့ သွေးမတော်သားမစပ်ဘာမှလည်းမတော်ပဲနဲ့ ၇ နှစ်လောက် အတူတူလက်တွဲလုပ်လာတဲ့ လူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ အတူကခဲ့တဲ့ အငြိမ့်တွေ ကြည့်တဲ့ အခါမှာ လွမ်းတာပါ…
အခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအလွမ်းစိတိကတအားများလာတယ် ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ စကိုင်းနက်ကနေ ထာဝရနှင်းဆီအငြိမ့်ကို ပြန်ပြနေတာလေ ပြန်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အငြိမ့်က ကျနော့ခေါင်းထဲကို ပိုပြီး ပြန်ရောက်လာ တာပေါ့နော်…
ဦးမျိုးနဲ့က အငြိမ့်မကဖြစ်ကတည်းက သိပ်မတွေ့ဖြစ်တော့တာပါ ကျနော် ၆ နှစ်လောက်ရှိသွားပါပြီ ၆ နှစ်လောက်ပေါ့နော် ဦးမျိုးနဲ့က ကျနော်က ပုံစံ၃ မျိုးလောက်ရင်းနှီးခဲ့ကြတာကိုး ဆရာလိုတမျိုး ကျနော့မှာ အဖေမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့
အဖေလိုတမျိုး နောက်သူငယ်ချင်းလိုတမျိုးပေါ့ အဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးခဲ့ကြတာပါ အလုပ်ကိစ္စမရှိတော့တဲ့ အတွက်သာမတွေ့ဖြစ်တာပါ ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာ အမြဲရှိနေတဲ့အတွက် သွားကန်တော့ လိုက်တာပါ” လို့ဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်….
မိုးမိုးက သီချင်းတွေ ထွက်ဖို့လည်း ကြိုးစားနေပေမယ့် ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်းမှာ စတူဒီယိုတွေအကုန်ပိတ်သွားတဲ့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းလည်း ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ် အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်နော်..
အႏုပညာေလာကမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အဆိုေတာ္မိုးမိုးကေတာ့ ယခုဆိုရင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာကို ႐ိုက္ကူးၿပီး တစ္ကိုယ္ေတာ္အေခြ အယ္လ္ဘမ္မ်ားလည္း ထြက္ရွိထားသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။
မိုးမိုးဟာ ႏွင္းဆီအၿငိမ့္မွာလည္း ပါဝင္တင္ဆက္ခဲ့ဖူးတာျဖစ္ၿပီး ၇ ႏွစ္ နီးပါးေလာက္ပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တာပါ ယခုရက္ပိုင္းမီဒီယာေတြ႕ဆုံမႈတစ္ခုမွာေတာ့ မိုးမိုးက ႏွင္းဆီအၿငိမ့္ အဖြဲ႕ထဲကို ျပန္ဝင္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ဆိုတာကို ေျပာျပလာ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္
“ေနာက္ပိုင္းေတာ့မေျပာတတ္ေသးပါဘူး ဦးမ်ိဳးရဲ႕ စိတ္ဆႏၵေပၚမွာလည္း မူတည္တာေပါ့ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ သူကလည္း ႏွင္းဆီရဲ႕ ပဲ့ကိုင္ရွင္ျဖစ္ေနတာဆိုေတာ့ေလ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့
အဓိကတစ္ခုရွိတာက ဘာလည္းဆိုေတာ့ အၿငိမ့္ဆိုတာ ႐ိုးသားစြာနဲ႔ ပရိသတ္အေပၚမွာ ဖီလင္အျပည့္နဲ႔ တကယ့္ကို စိတ္ထဲမွာထည့္ၿပီးေတာ့ ႏွလုံးသားထဲမွာ ဒီအၿငိမ့္က ရွိတယ္
ဒီလိုလုပ္ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုေနာက္ပိုင္းကိုေနတိုးကေရာ ထြန္းထြန္းကေရာေပါ့ေနာ္ အရင္တုန္းကသြားခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ေလးေတြကို Blog ေလးေတြ ျပန္တင္ေနတာ ေတြ႕ေတာ့ ဒီရက္ပိုင္း အၿငိမ့္ဆိုတာေခါင္းထဲျပန္ေရာက္ေနတယ္ ေျပာေတာ့မေျပာတတ္ေသးပါဘူး အေျခအေနအေပၚမူ တည္ၿပီးေတာ့မွ လုပ္ရမွာပါပဲ….
အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ေတာ့ သူတို႔ အၿငိမ့္ကေနစဥ္မွာ ကိုယ္က ပရိသတ္အေနနဲ႔ ပြဲၾကည့္ျဖစ္တယ္ ျပန္လြမ္းလားဆိုေတာ့ အဲ့လိုျပန္မလြမ္းဘူး
ျပန္မလြမ္းဘူးဆိုတာက သူတို႔က ျပက္လုံးအသစ္ေတြလုပ္ေနတာကိုး ျပက္လုံးအသစ္ေတြ လုပ္ေနတာဆိုေတာ့ ျပက္လုံးအသစ္ကို ကိုယ္ကပရိသတ္အေနနဲ႔ အားေပးေနရတာဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ အၿငိမ့္ကခဲ့တာေတြကို ေမ့ေနတာေပါ့…
ဒါေပမယ့္ အရင္တုန္းက အၿငိမ့္ေတြ ျပန္ၾကည့္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ လြမ္းတာေပါ့ ေသြးမေတာ္သားမစပ္ဘာမွလည္းမေတာ္ပဲနဲ႔ ၇ ႏွစ္ေလာက္ အတူတူလက္တြဲလုပ္လာတဲ့ လူေတြျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အတူကခဲ့တဲ့ အၿငိမ့္ေတြ ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ လြမ္းတာပါ…
အခုေနာက္ပိုင္းအဲ့ဒီအလြမ္းစိတိကတအားမ်ားလာတယ္ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ စကိုင္းနက္ကေန ထာဝရႏွင္းဆီအၿငိမ့္ကို ျပန္ျပေနတာေလ ျပန္ျပလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အၿငိမ့္က က်ေနာ့ေခါင္းထဲကို ပိုၿပီး ျပန္ေရာက္လာ တာေပါ့ေနာ္…
ဦးမ်ိဳးနဲ႔က အၿငိမ့္မကျဖစ္ကတည္းက သိပ္မေတြ႕ျဖစ္ေတာ့တာပါ က်ေနာ္ ၆ ႏွစ္ေလာက္ရွိသြားပါၿပီ ၆ ႏွစ္ေလာက္ေပါ့ေနာ္ ဦးမ်ိဳးနဲ႔က က်ေနာ္က ပုံစံ၃ မ်ိဳးေလာက္ရင္းႏွီးခဲ့ၾကတာကိုး ဆရာလိုတမ်ိဳး က်ေနာ့မွာ အေဖမရွိေတာ့တဲ့အခါက်ေတာ့
အေဖလိုတမ်ိဳး ေနာက္သူငယ္ခ်င္းလိုတမ်ိဳးေပါ့ အဲ့လိုမ်ိဳးရင္းႏွီးခဲ့ၾကတာပါ အလုပ္ကိစၥမရွိေတာ့တဲ့ အတြက္သာမေတြ႕ျဖစ္တာပါ ကြၽန္ေတာ့စိတ္ထဲမွာ အၿမဲရွိေနတဲ့အတြက္ သြားကန္ေတာ့ လိုက္တာပါ” လို႔ဆိုလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္….
မိုးမိုးက သီခ်င္းေတြ ထြက္ဖို႔လည္း ႀကိဳးစားေနေပမယ့္ ကိုဗစ္ ဒုတိယလႈိင္းမွာ စတူဒီယိုေတြအကုန္ပိတ္သြားတဲ့အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနရတဲ့အေၾကာင္းလည္း ေျပာသြားခဲ့ပါေသးတယ္ အဆုံးထိဖတ္ရႈေပးၾကလို႔ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ေနာ္..
သူမရဲ့အလှတရားတွေပေါ်လွင်အောင် ပို့စ်လေးတွေမျိုးစုံပေးကာ မိမိုက်နေတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ…
လွန်ခဲ့တဲ့ (၄) နှစ်က အချစ်ရေး ကိစ္စနဲ့အပြောကြီးခဲ့ပြီး (၂၀၂၀) မှာတော့ FA ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ သူ့ကိုယ်သူအရွှန်းဖောက်လာတဲ့ အဆိုတော် G Fatt..